Dadka niyadasan oo rajada wanaagsan dhinaca Mustaqbalka waxaa ku yar qaadista cudurada… – Hagaag.com
Dadka niyadasan oo rajada wanaagsan dhinaca Mustaqbalka waxaa ku yar qaadista cudurada…
Dadka niyadsamida leh oo ku hadaaqa rajada wanaagsan dhinaca mustaqbalka waxaa ku yar qaadista cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga mara iyo geeri deg deg ah, sidaasi waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo Mareykanka ka soo baxday.
Daraasaddan oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ayaa lagu sameeyay Isbitaalka Mount Sinai ee Magaalada New York waxaana lagu daabacay joornaalka JAMA Network Open.
Si loo muujiyo xiriirka ka dhexeeya rajo wanaaga iyo caafimaadka wadnaha, kooxdu waxay dib u eegeen natiijooyinka 15 daraasadood oo laga sameeyay Mareykanka, Yurub iyo Australia.
Qiyaastii 230,000 oo qof ayaa ka qeyb qaatey daraasadda, kuwaas oo da’doodu u dhaxayso 19 ilaa 93 sano, celcelis waqtiga dabagalka wuxuu ahaa 14 sano.
Kooxda ayaa dib u eegis ku sameysay dhimashada cudurada wadnaha ee ka qeyb galayaasha waxayna dib u eegeen heerarka niyad jabka, heerka waxbarasho, heerka dhaqan-dhaqaale, isticmaalka jimicsiga ama firfircoonida jir ahaaneed.
Baarayaasha waxaay ogaadeen in dadka niyadasan – waxkastoo sababo uga dhigaya inay ka rajo fiicnaadaan kuwa kale – ay u badantahay ineysan ku dhicin cudurada wadnaha ama u dhintaanba, marka loo barbar dhigo kuwa fikirka xun ka haysta nolosha iyo mustaqbalka.
Baarayaasha waxay sheegeen muhiimada daraasada ay leedahay in rajo wanaaga iyo rajo beelista ay yihiin qodobo si fudud loo qiyaasi karo oo loo tixgelin karo in wax laga badali karo, sidaa darteedna ay soo dhex gali karaan si loo yareeyo khatarta cudurada wadnaha iyo dhiig mareenka iyo dhimasha gebi ahaanba.
Waxay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan dib u eegis nidaamsan oo dheeri ah si loo ogaado xiriirka ka dhexeeya rajo wanaagga iyo rajo beelka dhinaca halista cudurada wadnaha iyo dhiig mareenka mustaqbalka.